Tetikasa fisakafoanana ho an'ny rivotra misakafo
1. Izy io dia mandray rafitra mifanohitra amin'ny onja, ny fantsom-pifanakalozana hafanana dia mandray rafitra serpentine, lehibe ny isan'ny fantsom-pifanakalozana hafanana, lehibe ny fifanakalozana hafanana ary ny faritra fivezivezena entona, kely ny fanoherana entona, ary avo ny fahombiazan'ny fifanakalozana hafanana ; ny habaka anatiny an'ny cooler dia ...
XIKOO rafitra mangatsiaka mangatsiaka kokoa ho an'ny orinasa mpanamboatra akanjo
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-04-24
Ny orinasan-damban'ny akanjo Guangzhou dia nifandray tamin'i XIKOO tamin'ny atrikasa 1000m2 nataony, Taorian'ny nahazoany ny haben'ny atrikasa sy ny fampahalalana hafa, ny injenieran'ny matihanina XIKOO Mr.Yang dia namolavola ny sary fanaovana rafitra fampangatsiahana. Andriamatoa Yang dia nanolotra 14mm XK-25H sy mpankafy 11pcs ho an'ny rafi-pitabatabana. XK-25H dia XIKOO vaovao m ...
XIKOO new design apor
Ny etona-drivotra miakatra dia manondro ny fampiasana ny etona hamandoana sy ny fivezivezena an-tery hanala ny hafanana manondrana mba hampangatsiaka ny etona avo lenta sy ny etona avo lenta avoaka avy amin'ny compressor ary hampidina azy io ho ranoka. Azo ampiasaina betsaka amin'ny petrochemi ...
XIKOO air cooler no safidy tsara indrindra ho an'ny cool workshop
Inona no tokony hatao raha avo be ny mari-pana amin'ny fahavaratra mafana? Izany no mahasosotra an'ireo orinasa maro. Satria tsy misy vahaolana mangatsiaka amin'ny atrikasa amin'ny fahavaratra izay afaka mamaha ny olan'ny hafanana ao amin'ny atrikasa, ny hafanana amin'ny fahavaratra dia tsy manimba ny fahombiazan'ny asan'ny mpiasa ihany, fa mamela ihany koa ny ratsy ...
Seminera fitomboana ho an'ny tena manokana sy avo lenta
Vanim-potoana fianarana isan-taona ho an'ny mpiasa miavaka ao amin'ny XIKOO. Mba hampiroboroboana talenta miavaka, XIKOO dia handefa mpiasa handray anjara amin'ny seminera ao amin'ny Chamber of Commerce momba ny ekipa fitomboana manokana sy avo lenta. Tsy fivoriana mahazatra io fa telo andro feno ...
XIKOO masoandro DC rivotra cooler
XIKOO Industrial Co., Ltd. dia nifantoka tamin'ny famolavolana sy ny famokarana angovo fitahirizana angovo azo avy amin'ny angovo ary tia tontolo iainana nandritra ny 14 taona mahery. Ny cooler etona manetona dia ampiharina ny fitsipiky ny rano mifoka hafanana amin'ny alàlan'ny etona mba hampidina ny mari-pana amin'ny rivotra. Env ...
Ny maodely axial an'ny indostria XIKOO sy ny maodely centrifugal dia ampiasaina amin'ny atrikasa fitaovan'ny milina
XIKOO dia manana cooler an'habakabaka isan-karazany, izay anisany maodely indostrialy mety indrindra ampiasaina amin'ny atrikasa famokarana ary koa maodely malaza indrindra amin'ny ozinina. Tamin'ny faran'ny taona 2020 dia nanasa anay ny mpanjifa mba hanao famolavolana mangatsiaka ho an'ny ozinin'izy ireo, izay mamokatra fitaovana masinina. Bec ...
Fampitahana ny angovo azo ampiasaina amin'ny rivotra sy rivotra
Fampitahana ny angovo amin'ny fampangatsiahana rivotra sy ny fividianana rivotra tradisioner nentim-paharazana dia manana fanjifana angovo avo sy fandaniam-bola be, izay mametra ny fatran'ny fividianana amin'ny lafiny iray. Ny cooler éaporaporite dia manana ny mampiavaka ny fitsitsiana angovo, ny maha-olona, ​​ny hatsarana ary ny en ...
Aorian'ny Taom-baovao Sinoa amin'ny 2021, hanomboka amin'ny fomba ofisialy ny fanamboarana, ary hapetraka amin'ny fomba ofisialy ny atrikasa sy ny sampana rehetra ao Xingke.
Ny Taom-baovao Sinoa dia nitondra fialantsasatra 20 andro miaraka amin'ny karama ho an'ny mpiasan'ny Xingke, mba hahafahan'ny mpiasa tsirairay miverina mihaona amin'ny fianakaviany. Niverina niasa tamin'ny fomba ofisialy indray izy ireo, feno angovo sy moraly ny tsirairay. Tamin'ny 8:36 ny 23 febroary, nivory ny mpiasa rehetra togethe ...
XIKOO 2020 hetsika famintinana faran'ny taona
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-02-27
Mandeha haingana ny fotoana, ary mifarana ny 2020 izao. Ny Taom-baovao Sinoa amin'ny Taom-baovao amin'ity taona ity dia amin'ny 12 Febroary, hanana herinandro fialantsasatra araka ny lalàna ny olona handray ny taona vaovao. Manomboka amin'ny 1 feb ka hatramin'ny 2 feb., XIKOO dia manao fety dite faran'ny taona. Niara-niresaka momba ny t ...